Warshada Kateetarka Iyo Tube-ka | Shiinaha Kateetarka Iyo Tube-saareyaasha, shirkado cusub
CE ISO Qeybinta Caafimaadka Fasaxa Caafimaadka PCV Nuugista Kateetarka
Kateetarka nuugista waxaa loo isticmaalaa in lagu nuugo xaakada iyo dheecaanka ku jira mareenka neefta. Kateetarka waxaa loo isticmaalaa si toos ah oo loo galiyo cunaha ama tuubada tracheal ee la geliyay suuxdinta
Badeecada Caafimaadka ee Kaadida Balloon Caafimaad ee La Tuuri Karo Silicone Dahaarka Latex Foley Lab Kateetarka Biyo Biyuhu
Kateetarka dawada ee loo yaqaan 'Latex foley catheter' waxaa loo adeegsadaa qeybaha kaadi-mareenka, daawada gudaha, qalliinka, dhalmada, iyo cudurada haweenka ee kaadi-saarista iyo daawada.
Tube Quudin Caloosha PVC Quusin Caafimaadka Iyadoo Shahaadada CE
Tuubada quudintu waa aalad caafimaad oo loo isticmaalo in lagu siiyo nafaqo bukaanada aan nafaqada ka heli karin afka, aan awoodin inay si ammaan ah wax u liqaan, ama u baahan kaabis nafaqo. Xaaladda lagu quudinayo tuubo quudinta waxaa loo yaqaannaa gavage, quudinta xubnaha ama quudinta tubada.
Sunta Yareysa Sunta Cudurka Daacuunka Enema Rectal Tubes Catheter
Waxaa laga sameeyay maadada caafimaad ee aan sunta ahayn ee PVC, hufan, dabacsan, DEHP-BILAASH waa ikhtiyaari
Midab-sumad u leh aqoonsiga cabbirka fudud.
Dhererka tuubada: 34.5cm ama Length ayaa loo habeyn karaa baahida macaamiisha.
Dusha Transparent ama Mist waa la heli karaa
Koodhka Midabka Liinta, Casaanka, Jaalaha, Guduudka, Buluuga ah, Casaanka ah, Cagaarka ah, Madow, Buluug ah, Sumurud, Buluug Fudud CE la calaamadeeyay
OEM waa la aqbali karaa.
CE ISO-tuurista Caafimaadka Sanka Oxygen Cannula Tube / Kateetarka
Naaska Oxygen Cannula waa qalab Oxygen qaada oo leh laba waddo, Waxaa loo isticmaalaa in lagu gaarsiiyo oksijiin dheeri ah bukaanka ama qofka u baahan oxygen dheeraad ah.
Nasanka Oxygen Cannula waxaa laga sameeyay PVC ee darajada caafimaadka, wuxuu kakooban yahay isku xiraha, tuubada boosta kuxiran, sedexda kanaal iskuxiraha, clip, tubada laanta kuxiran, sanka nuugista.
Tuubista 'Endortracheal Tube' oo leh Cuff
Tuubada ilmo-galeenka 'endotracheal tube' waa tuubbo jilicsan oo afka la galiyo iyada oo la marsiinayo hawo mareenka (windpipe) si bukaanka looga caawiyo neefsashada. Tuubbada ilmo-galeenka ayaa markaa lagu xiraa hawo-qaade, kaas oo oksijiin geeya sambabada. Nidaamka gelinta tuubada waxaa loo yaqaan 'endotracheal intubation'. Tuubada 'Endotracheal tube' weli waxaa loo tixgeliyaa aaladaha 'heerka dahabka' ee lagu ilaaliyo laguna ilaaliyo marin-haweedka.
Sahayda La Tuuri Karo ee Caafimaadka Icu Xannibaada Daryeelka Khatarta ah Nidaamka Quudinta Xidhan ee Kateetarka
Nidaamka nuugista xiran waa nidaam soosaara oo xiran.
Waxaa loogu talagalay gacan-ka-ilaalin si loo go'doomiyo jeermiska gudahiisa isla markaana looga caawiyo daryeelayaasha inay ka fogaadaan infekshinka is-tallaalida
Naqshadeynta hawo qaadashada isku mar ayaa u oggolaan doonta raaxada bukaanka ee nuugista iyada oo aan la joojin hawo-qaadashada.
CVC Kala-Bixinta Cudurka Suuxdinta Icu Daryeelka Khatarta ah ee Daryeelka Khatarta ah ee Central Catheter Catheter
Central Venous Catheters-ka (CVC) waa nadiif, hal-keliya kali-qabeyaal polyurethane ah oo loogu talagalay in lagu fududeeyo daaweynta faleebada ee jawiga daryeelka halista ah. Waxaa lagu heli karaa noocyo kala duwan oo ah qaabeynta lumen, dhererka, cabbirka Faransiiska iyo Gauge. Noocyada kala duwan ee lumen-ka waxay bixiyaan lumens u gaar ah daaweynta faleebada, kormeerka cadaadiska iyo muunad samaynta. CVC-ga waxaa lagu soo lifaaqay oo ay la socdaan qaybaha iyo qalabyada loogu talagalay gelinta farsamada Seldinger. Dhammaan alaabooyinka waxaa lagu nadiifiyaa by ethylene oxide.